OTU ESI AKPỌSAA NA ODNOKLASSNIKI - ỤMỤ KLAS - 2019
Kpọsaanụ na Odnoklassniki
Mgbasa ozi bụ ụzọ dị irè iji dọta uche ndị mmadụ na echiche gị ma ọ bụ ngwaahịa gị. Taa, mgbasa ozi na netwọk mmekọrịta bụ ịnweta mgbasa ozi na-arịwanye elu. Dịka ọmụmaatụ, na Odnoklassniki e nwere ọnụ ọgụgụ zuru oke nke ndị na - ege ntị na - erughị afọ 30, bụ ndị nwere ike ịzụta ngwaahịa gị ma ọ bụ mee ihe ọ bụla ọzọ achọrọ.
Banyere ụdị nke mgbasa ozi na netwọk mmekọrịta
A na-ekewa mgbasa ozi na netwọk mmekọrịta dị iche iche, bụ nke a na-akwụ ụgwọ na arụmọrụ. Tụlee ụdị nke ọ bụla na atụmatụ ya n'ụzọ zuru ezu:
Ịzụta posts n'ìgwè na / ma ọ bụ site na akaụntụ ụgha. Ihe bụ isi bụ na ị zụrụ n'otu ìgwè ikike iji tinye mgbasa ozi n'aha ha. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịzụta n'aka nnukwu obodo ndị nweelarị ndị na-ege ntị na aha ha. Na mgbakwunye na ọnụ ọgụgụ nke ndị so na ya, ọ dị mkpa ịṅa ntị n'otú ha si arụ ọrụ nke ọma na ntinye, tinye "klas" na ọkwa.
Hụkwa ugboro ole ìgwè na-ebipụta posts mgbasa ozi. Ọ bụrụ na ọ na-adịgide adịgide, mgbe ahụ, nke a adịghị mma, ebe ọ bụ na nke a, ọ bụ ihe siri ike iji dọta uche nke ndị so na ya. Ọ bụrụ na ọ dị oke ụkọ, mgbe ahụ, nke a bụ ihe mere ị ga-eji dị egwu, n'ihi na, ma eleghị anya, otu a enweghị aha ọma n'etiti ndị mgbasa ozi. Ọnụahịa zuru oke nke mgbasa ozi bụ 1-2 posts kwa ụbọchị;
Mgbasa ozi ezubere iche. Site n'enyemaka nke usoro ndị pụrụ iche, a na-egosipụta njirimara mgbasa ozi mgbasa ozi unobtrusive. N'okwu a, onye ahịa nwere ike ịhọrọ ọnụ ọgụgụ nke echiche, ọnọdụ, afọ, okike na data ndị ọzọ ndị ọrụ ahụ ga-egosi ya. Nke ahụ bụ, mgbasa ozi na-ahụ naanị site n'aka ndị nwere mmasị. Ọ bụrụ na ị na-esiri ike ịbịakwute atụmatụ nke mgbasa ozi na ọdịnaya ma ghara itinye aka na mmefu ego, ị ga-enweta ezigbo ntọghata.
Usoro 1: Mgbasa ozi na otu
N'ihe banyere nhọpụta na ịhazi nke mgbasa ozi na netwọk mmekọrịta, ọ gaghị ekwe omume inye ntụziaka site na nkwụsịtụ, ma ọ bụ ndụmọdụ ndụmọdụ n'ozuzu, agbakọtara na nkebi:
Na nke mbụ, nyochaa ndị na-ege gị ntị (CA), ya bụ, ndị ahụ ga-achọ ma ọ bụ kwesịrị inwe mmasị na atụmatụ gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-ekesa nri oriri ọ bụla, mgbe ahụ, o yiri ka ndị ahịa gị bụ ndị na-etinye aka na egwuregwu.
N'otu aka ahụ, na nke mbụ, mee nnyocha nke isiokwu nke ìgwè ahụ na ndị na-ege ya ntị. Ebe ọ bụ na o yighị ka ị ga-enwe nnukwu ntọghata ma ọ bụrụ na ị na-ere nri oriri na-edozi na ìgwè dị iche iche na-edozi na / ma ọ bụ ubi. Ọ bara uru ịtinye n'òtù dị iche iche dị iche iche nke ndị na-etinye aka na njakịrị na ọchị, ebe ọ bụ na a na-erekarị ọtụtụ ngwongwo, ma enwekwara ohere ịnweta ọkụ.
Echefula na, nke kwesịrị, e kwesịrị inwe ọtụtụ ndị so n'òtù ahụ (ka ọ dịkwuo mma), n'otu oge ahụ, ha kwesiri iji nlezianya nyochaa ma kwuo banyere ndenye obodo.
Ọ bụrụ na isi nke ìgwè ahụ dabara na nke gị, gbakwunye ọnụ ọgụgụ nke ndị sonyere na mgbasa ozi ndị ọzọ bipụtara na-adọrọ gị ọdụ, mgbe ahụ ịkwesịrị ikwenye na nchịkwa na mbipụta nke mgbasa ozi gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ na ndị mgbasa ozi na akụkụ nke nchịkwa nke otu, nkọwa kọntaktị kwesịrị itinye na nkọwa ahụ. Gaa na onye nchịkwa obodo / onye profaịlụ.
Dee ya ozi na-ekwu na ị ga-achọ ịzụta mgbasa ozi na otu ya. Jide n'aka na ị ga-ajụ ọnụ ahịa ego, ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime ìgwè ahụ ekwughị kpọmkwem.
Ọ bụrụ na ihe niile ruru gị ala, mezie ndokwa. Ọtụtụ mgbe, ndị nchịkwa na-ewere 50-100% prepayment, ya mere, buru ụzọ lee ìgwè ahụ anya maka ọnụnọ nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ iji jide n'aka na onye òtù ọlụlụ gị na-akwụwa aka ọtọ.
Kwadebe ozi mgbasa ozi na zipu onye nchịkwa na ozi nzuzo ya na arịrịọ ị ga-etinye na oge ụfọdụ.
Lelee ma etinyere post na otu.
A pụrụ ime atụmatụ a na ọtụtụ obodo iji nweta mmetụta dị ukwuu karị. Atụla egwu na a ga-atụba gị, dịka mkpọsa mgbasa ozi na otu na Odnoklassniki na-akwụ ụgwọ ihe dị ka 400-500 rubles na nkezi, na maka uru ngwa ngwa na nchịkwa obodo agaghị achọ ka aha ya ghara ịdị, ya mere, ndị mgbasa ozi n'ọdịnihu.
Tụkwasị na nke a, ị nwere ike iji ọrụ pụrụ iche ga-ahọrọ ìgwè dị iche iche maka njedebe nke mgbasa ozi gị. Otú ọ dị, a na-atụ aro ọrụ ndị dị otú ahụ naanị ndị mgbasa ozi nwere ahụmahụ na-akwadebe mgbasa ozi mgbasa ozi buru ibu.
Usoro 2: Mgbasa Ozi Echebere
Mgbasa ozi ezubere iche na-enye gị ohere igosi ngwaahịa gị naanị na ndị na-ege ntị a na-echebara anya nke a haziri maka afọ gị. N'okwu a, ga-eji saịtị ndị ọzọ na-enye ọrụ ndị yiri ya. Otu n'ime ndị a ma ama na nke kachasị mma maka gị bụ MyTarget. Ugbu a, ọ dịka Odnoklassniki, bụ nke Mail.ru Group nwere. Na mgbakwunye na Odnoklassniki, na-eji usoro a, ị nwere ike kpọsaa na ihe ndị ọzọ na-ewu ewu sitere Mail.ru.
Tupu ịmalite mgbasa ozi mgbasa ozi, ka ị mara gị nke ọma site n'echiche nke isi nke ndị na-ege gị ntị na-arụ ọrụ a:
Ụdị ọdịmma na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Nke ahụ bụ, ị nwere ike ịhọrọ ndị mmadụ, dịka ọmụmaatụ, nwere mmasị na egwuregwu, egwuregwu kọmputa, wdg;
Ọ bụrụ na mgbasa ozi gị nwere ihe mgbochi ọ bụla, ịkwesịrị ịtọ ha, ka ndị na - eto eto Odnoklassniki wee ghara ịhụ ya;
Ebe onye na-azụ ahịa;
Na ọrụ a, e nwere ihe dị otú ahụ na nhọpụta nke ndị na-ege ntị, dị ka "Ụbọchị ọmụmụ". N'okwu a, ọkwa ahụ ga-egosipụta naanị ndị ọrụ ahụ ga-eme ezumike a n'oge na-adịghị anya.
Tụkwasị na nke a, ị kwesịrị ịmara onwe gị na usoro ịkwụ ụgwọ maka ụdị mgbasa ozi a, n'ihi na ọ bụghị maka posts, dị ka ndị otu, mana maka clicks. Dịka ọmụmaatụ, 1 pịa ad, na 60-100 rubles dere na akaụntụ gị.
Mgbe ị tụlechara echiche ndị bụ isi, ị nwere ike ịga n'ihu na ntinye mgbasa ozi mgbasa ozi na Odnoklassniki. Jiri ntụziaka a:
Ozugbo ị gbanwere na MyTarget, ị nwere ike ịgụ nkowa nkesa nke ọrụ na aha. Iji malite mkpọsa, achọrọ aha. Iji mee nke a, pịa nri elu nke ihuenyo ahụ. "Ndebanye aha" na n'etiti ụzọ, họrọ akara ngosi nke netwọk mmekọrịta, na enyemaka nke ọ na-adịrị gị mfe ịbanye. A windo ga-emeghe ebe ị ga-achọ pịa "Kwe ka" na mgbe ndebanye aha ahụ gachaa.
Mgbe ị debanyere aha, akwụkwọ nhazi mgbasa ozi ga-apụta, ma ebe ọ bụ na ị nweghị otu, a ga-agwa gị ka ịmepụta otu.
Na mbụ, họrọ ihe ịchọrọ ịkwasa. Na ntuziaka a ga-abụ ihe atụ nke ịmepụta mgbasa ozi maka saịtị ahụ. Otú ọ dị, template nke usoro nke ịmepụta mkpọsa mgbasa ozi adịghị agbanwe n'ụzọ ọ bụla, ọ bụrụ na i jiri ihe ọ bụla ọzọ si na listi ahụ.
Kọwaa njikọ ahụ na saịtị mgbasa ozi. Ọ bụrụ na ngwa a, isiokwu ma ọ bụ biputere ìgwè, mgbe ahụ, ha kwesịkwara ịkọwa njikọ ahụ, ma ọ bụrụ na ị na-akwalite ụlọ ahịa gị n'ịntanetị, ị ga-ebudata ndepụta ọnụahịa nke ngwaahịa.
A ga-eburu peeji maka ịtọọ nhọrọ nke onyinye mgbasa ozi. Ịkwesịrị iji nanị otu ihe - "Pụrụ Iche 240 × 400 na netwọk mmekọrịta na ọrụ", n'ihi na ọ bụ naanị na mgbasa ozi a ka a ga-egosi ndị ọrụ Odnoklassniki.
Ntọala ntọala ga-emeghe. Dee nkọwa nke ọrụ / ngwaahịa gị, tinyekwara ọkọlọtọ iji bọtịnụ "Download 240x400".
N'okpuru ebe a bụ paragraf na mkpado pụrụ iche na-enye gị ohere inyocha ogo irè mgbasa ozi na mpaghara ụfọdụ. Ọ bụrụ na ị bụghị ọkachamara n'ihe gbasara ahụ ike, mgbe ahụ a na-atụ aro ka ị ghara ịgbanwe ihe ọbụla na nke a. Naanị ihe ị nwere ike ịhọrọ - "Unu atụkwasịla mkpado" ma ọ bụrụ na ị gaghị etinye mgbasa ozi mgbasa ozi buru ibu na netwọk mmekọrịta, mana ịchọrọ ịdọrọ onwe gị na obere njirimara.
Ugbu a bịa na ntọala nke ndị na-ege gị ntị. Ebe a na-egosi okike, afọ, ọdịmma na ihe ndị ọzọ gbasara ndị ahịa. Dezie ụkpụrụ onwe gị dị ka ị na-ahụ ya ka ọ baara uru maka ịbịaru ndị na-ege ntị na àgwà ya.
Pịgharịa site na ntọala ntakịrị ala. N'okpuru isiokwu "Ebee" Ị ghaghị ịkọwa ọnọdụ nke ndị ahịa gị. N'ebe a, ị nwere ike ịchekwa mpaghara, mpaghara, mpaghara, mpaghara n'ozuzu, ị nwere ike ịhazi mgbasa ozi na obodo ọzọ.
Nanị ederede bụ: ọbụlagodi na ị na-akwalite ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ịkwesighi ịhọrọ ụwa dum - ndị na-ege ntị nwere ike ibu nnukwu, ma ọ gaghị ele gị anya ma ọ bụrụ na ngwaahịa adịghị eru ma ọ bụ na-aga ruo ọtụtụ ọnwa, ọ bụ ezie na e nwere ndị ọzọ.
Ugbu a ịkwesịrị ịhazi oge mmalite nke mgbasa ozi na ngosipụta ya. N'oge a, kwa, i kwesiri ibiaruo oru zuru oke, nyere gi na Central Central Asia ike ihi ura ugbua ma obu bu oru. A na-atụle mgbasa ozi 24/7 nanị ma ọ bụrụ na ị nwere mpaghara mkpuchi zuru oke (dịka ọmụmaatụ, mpaghara niile na mba nke mbụ USSR).
Na njedebe, ọ na-anọgide na-enye ụgwọ maka clicks. Nke ka elu, ọ dịkwuo mkpuchi nke ndị na-ege ntị, yana ka ọ ga-adịrị ka ị ga-eme ihe ụfọdụ a na-atụ anya, dịka ọmụmaatụ, ịzụta, wdg. Maka ọrụ nkịtị nke mkpọsa mgbasa ozi, ọrụ ahụ na-atụ aro itinye ọnụego ma ọ dịkarịa ala rubles 70. kedu ọ bụla, ma ọ nwere ike ịba ụba dabere na ntọala nke ndị na-ege ntị.
Tupu ịmepụta mkpọsa, ṅaa ntị na aka ekpe - a na-edepụta ndị na-ege ntị na ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ na dịka pasent nke ndị na-ege ntị n'ụwa nile, nke dabara na njedebe ị setịpụrụ. Ọ bụrụ na ihe niile ruru gị ala, pịa bọtịnụ ahụ. Mepụta Mgbasa Ozi.
Mgbasa ozi ga-amalite ịpụta na ndị ọrụ naanị mgbe ọ na-agabigaghị oke ókè na ị mejupụta ego mgbasa ozi na ọrụ a. Ntuzi na-emekarị ihe na-erughị otu ụbọchị.
90% nke ịga nke ọma mgbasa ozi na-adabere ọ bụghị naanị na ọnọdụ ya ziri ezi, kamakwa otú i si egosi ya na onye ọrụ njedebe ma nwee ike ịmepụta ihe osise nke onye ahịa gị. N'enyeghị oke, ebe ikpeazụ bụ otu n'ime ihe siri ike n'itinye aka n'ụzọ ziri ezi, nke na-edugakarị na ọnwụ nke mgbasa ozi mgbasa ozi.